Jenezy 10 - Ny Baiboly
Jenezy toko 10
Filazana misesy ny firenena taranak'i Noe.
1Izao no taranak'i Sema sy Kama ary Jafeta, zanak'i Noe. Nitera-dahy izy ireo taorian'ny safo-drano.
2Zanak'i Jafeta: Gomera, Magoga, Maday, Javàna, Tobala, Mosòka, ary Tirasa. 3Zanak'i Gomera: Aseneza, Rifata, ary Togorma. 4Zanak'i Javàna: Elisà sy Tarsisa ary Setima sy Dodanima. 5Avy tamin'ireo no ihavian'ny vahoaka miely amin'ny nosim-pirenena any amin'ny taniny avy, samy araka ny fiteniny sy araka ny fianakaviany, araka ny fireneny avy.
6Zanak'i Kama: Kosy, Mesraima, Fota, ary Kanaana. 7Zanak'i Kosy: Sabà, Hevilà, Sabatà, Regmà ary Sabatakà. Zanak'i Regma: Sabà sy Dadàna. 8Kosy niteraka an'i Nemroda, izay voalohan'olona manam-pahefana tamin'ny tany. 9Mpihaza mahery teo anatrehan'ny Tompo izy, ka izany no anaovan'ny olona hoe: Tahaka an'i Nemroda mpihaza mahery eo anatrehan'ny Tompo. 10Ny niandohan'ny fanjakany dia Babela, Aràka, Akada, ary Kalane any amin'ny tany Senaara. 11Avy ao amin'io tany io izy dia nankany Asora, ka nanorina an'i Niniva, Rekobota-Ira, Kale, 12ary Resena anelanelan'i Niniva sy Kale; io no ilay tanàna lehibe. 13Mesraima niteraka ny Lodima, ny Anamima, ny Laabima, ny Neftoima, 14ny Fetrosima, ny Kasloima, izay ihavian'ny Filistina ary ny Faftorima. 15Kanaana niteraka an'i Sidòna lahimatoany, sy Heta; 16ary koa ny Jeboseana, ny Amoreana, ny Jerijeseana, 17ny Heveana, ny Araseana, ny Sineana, 18ny Aradiana, ny Semareana, ary ny Amateana. Ary nony taty aoriana niely ny fokon'ny Kananeana. 19Ka ny faritanin'ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin'ny tandrifin'ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin'ny tandrifin'i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. 20Ireo no taranak'i Kama, araka ny fianakaviany sy araka ny fiteniny avy, any amin'ny taniny sy any amin'ny fireneny avy.
32Ireo no fianakavian'ny zanak'i Noe, araka ny taranany, any amin'ny fireneny avy. Avy amin'ireo ny firenena niely teto ambonin'ny tany, aorian'ny safo-drano. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0254 seconds